Gandaki Sanchar » क्रिकेटका कुन खेलाडीलाई कति पारिश्रमिक ?
क्रिकेटका कुन खेलाडीलाई कति पारिश्रमिक ?
भदौ २७, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान०ले राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीको २०१९ को पारिश्रमिक ९तलब० खेलाडीको खातामा पठाएको छ । क्यानले केन्द्रीय अनुबन्धमा रहेका २२ खेलाडीको २०१९ पारिश्रमिक पठाएको हो । क्यानले यसअघि आईसीसीको मागअनुसार २२ खेलाडी र एक जना टेक्निकल एनालिस्टसहित २३ जनाको विवरण आईसीसीमा पठाएको थियो । त्यहीअनुसार सेप्टेम्बर १ मा आईसीसीले रकम निकासा गरेको थियो । पछिल्लोपटक नेपाली खेलाडीले २०१७ र २०१८ को तलब २०१९ को फेबु्रअरीमा एकमुष्ठ प्राप्त गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् ९आईसीसीले० खेलाडीको हरेक ग्रेडमा पारिश्रमिक १० हजारका दरले बढाएर पठाएको थियो । ग्रेड ‘ए’का खेलाडीले मासिक ४५ हजारका दरले पठाएको छ । ग्रेड ‘बी’का खेलाडीले ३५ र ग्रेड ‘सी’मा रहेका खेलाडीले २५ हजार मासिकका दरले पठाएको छ । यसअघि ‘ए’ ग्रेड खेलाडीले ३५ हजार, बी ग्रेडकाले २५ हजार र सी ग्रेडका १५ हजार प्राप्त गर्दै आएका थिए ।
पछिल्लोपटक २०१७ र २०१८ को तलब पाउँदा तीन ग्रेडमा २१ जना खेलाडी थिए । २०१९ को लागि अपडेट भएको ग्रेडिङ लिस्टमा २२ जना छन् । जसमा ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेडमा समान ८ जना छन् भने ‘सी’ ग्रेडमा ६ जना छन् । २०१९ मा राम्रो प्रर्दशन गरेका विनोद भण्डारी ग्रेड ‘ए’मा छन् । २०१९ मा खासै अन्तर्राष्ट्रिय खेल नखेलेका स्पिनर वसन्त रेग्मीले ग्रेड ‘बी’को पारिश्रमिक पाउनेछन् । तीव्र गतिका बलर अभिनाश बोहरा र आरिफ शेख ग्रेड ‘बी’मा छन् । अभिनाश बोहरा खातामा पैसा आइसकेको पुष्टि गरेका छन् ।
२०१९ मा खेलाडीको ग्रेड
ग्रेड ‘ए’ – पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषवाकर, सोमपाल कामी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, विनोद भण्डारी र दीपेन्द्रसिंह ऐरी ।
ग्रेड ‘बी’ – रोहितकुमार पौडेल, अभिनाश बोहरा, सुशन भारी, मोहम्मद आरिफ शेख, ललितनारायण राजवंशी, सन्दीप जोरा, पवन सरार्फ र वसन्त रेग्मी ।
ग्रेड ‘सी’ – कुशल भुर्तेल, राशिद खान, इशान पान्डे, राजु रिजाल, प्रदीप ऐरी र कुशल मल्ल ।
प्रकाशित मिति २७ भाद्र २०७७, शनिबार ००:२७